UMthembu useyilungele iComrades | News24
UMthembu useyilungele iComrades
Umsubathi wakuleli uBongmusa MthembuPHOTO: supplied
Umsubathi wakuleli odle umhlanganiso kwi-Comrades Marathon ngo-2014 uBongmusa Mthembu uthe ukholelwa ekutheni umsubathi wakuleli ozophuma phambili kulo mjaho kuwo lonyaka.
Yize anqoba umjaho we-Comrades Marathon ngo-2014 nokwamenza wahlonipheka njengo msubathi, kodwa uMthembu uzoya emjahweni kowesi-92 we-Comrades Marathon kukhona okukhulu ekusamele akwenze.
Engxoxweni ekhethekile ne-Maritzburg Echo uMthembu uthe amalungiselelo akhe alomjaho ahamba kahle kakhulu.
“Amalungiselelo ahamba kahle. Ngahamba ngaya kuma-World Campionships lapho ngafike ngathola khona isiliva kanti nakwi-Two Oceans ngenze kahle kakhulu ngangena kwabokuqala abayi-6.
Ngizikale kahle kwi-Two Oceans ngoba iyasiza ekutheni ngazi ukuthi ikuphi ekufanele ngengeze kukho ukuze ngenze kahle kwi-Comrades. Siyazi ukuthi kwi-Comrades ijubane osuke uhamba ngalo kwi-Two Oceans alibalulekile kepha kufuneka uzethemba.”
Lo msubathi waseBulwer oneminyaka engama-35 ubudala uvumile ukuthi umjaho we-Comrades owumqansi obheke eMgungundlovu ujwayele ukuba nzima.
“Izinhlelo nginazo kodwa okwamanje okubalulekile ukuthi uma sijima umqeqeshi abone ukuthi sizogijima kanjani. Nginethemba lokuthi ngizogijima kahle ngilandele namasu omqeqeshi sibone ukuthi azosibekaphi.”
UMthembu uthe akulula ukusho ukuthi ubani oyimfivilithi kulo nyaka kulomjaho ozobe ubhekwe ngamehlo abomvu.
“Akulula ukusho ukuthi ubani ongawina ngoba nami baningi abazobe bebhekile ukuthi ngizogijima kanjani yingakho kungabalulekile ukuthi ngibheke ukuthi obani abakhona. Ngeke usho ukuthi lomuntu ogijime kahle ngonyaka ophelile uyena ozophinde agijime kahle futhi. Okubalulekile ukuthi ngibhekane namasu okuthi ngigijime kahle.”
Eqhuba uMthembu uthe akangabazi ukuthi i-Comrades izowinwa umuntu walapha eNingizimu Afrika.
“Angeke kube umuntu wase Lesotho, Zimbambwe noma abangaphesheya kwezilwandle kodwa kuzoba umuntu wakhona lapha ekhaya. Abasubathi bethu basezingeni eliphezulu njengoba sibonile beyithatha naseminyakeni edlule.”
Ngonyaka ka-2014 uMthembu wanqoba lomjaho ngesikhathi esingu 5:28:36 kanti kwamthatha iminyaka emihlanu kuya kweyi-6 ukuthi agcine ewunqobile. Ngonyaka ka-2012 wayekade elale indawo yesibili ehlulwa uLudwick Mamabolo.
Umjaho we-Comrades Marathon ngonyaka owedlule unqotshwe uDavid Gatebe. Kulo nyaka bangu-19 529 abasubathi baseNingizimu Afrika abangenele kanti lo mjaho ozoqala ngo 5:30 ekuseni uphele emuva kwamahora ayi-12 eScottsville Race Course kanti uzoba yibanga lingama-88